गुटबन्दीबाट एनआरएनलाई बाहिर ल्याऔँः इन्द्रा वन - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
गुटबन्दीबाट एनआरएनलाई बाहिर ल्याऔँः इन्द्रा वन
प्रकाशित मिति: १४ असार २०७२, सोमबार June 29, 2015
आगामी चार जुलाईका दिन हुन गइरहेको एनआरएन अष्ट्रेलियाको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली समूदाय अष्ट्रेलियाको अग्रज व्यक्तित्व तथा एनआरएन अष्ट्रेलियाकी संरक्षक इन्द्रा वनले असनेपालन्युजका प्रधान सम्पादक भीमसेन सापकोटा सँग गर्नु भएको विशेष कुराकानीः
एनआरएन अष्ट्रेलियाको निर्वाचन नजिकिँदैछ, आगामी नेतृत्वका लागि विभिन्न व्यक्तिहरू प्रतिष्पर्धामा देखिएका छन्, कस्ता व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्नु पर्ला?
नेतृत्वको विषयमा मेरो निष्पक्ष सोचाई हुन्छ । जो मानिस योग्य छ, उसैले चुनाव जित्नु पर्दछ । समूदायको लागि काम गर्ने सक्ने, सक्षम र योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा एनआरएनको संस्थागत विकासका लागि टेवा पुग्छ । त्यसैगरी नेतृत्व चयन गर्दा हामीहरूले एनआरएनमा उसको लगानी कति छ र उसले के प्रतिफल दिएको छ भन्ने कुराको मसिनो मुल्याङकन गर्नु पर्दछ । त्यसका अतरिक्त उसको कामबाट समूदाय कति लाभान्वित भएको छ त्यो पनि मनन गर्नुपर्दछ । चुनाव निष्पक्ष हुनु पर्दछ । ग्रुपिजम हुनु हुँदैन । व्यक्ति भन्दा संस्था ठूलो हो भन्ने भावना जागृत हुनुपर्दछ ।
तर, एनआरएनमा राजनीति हावी भयो, ग्रुपिजम बढ्यो भन्ने सुनिन्छ नी ?
दुई वर्ष अगाडि र अहिलेको चुनावमा निकै भिन्नता आएको छ । आइसीसी र एनसीसीको विधानले पनि कुनै पनि व्यक्ति प्यानलबाट निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यदी त्यसो गरेको पाइएमा उसको उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको अधिकार विधानमै प्रत्यायोजन गरिएको छ । पहिला जस्तो प्यानल नै बनाएर पर्चा वितरण भएको छैन । त्यो सन्दर्भमा स्टेट र नेशनल इलेक्सन कमिस्नरहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहनु भएको छ । निर्वाचनको श्वच्छता र गरिमालाई कायम राख्न र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन उहाँहरूले जुन खालको भूमिका खेल्नु पर्ने थियो त्यो खेलिरहनु भएको छ । अहिले आइसीसीमा बस्नु भएका पदाधिकारीहरूले पनि सुझबुझपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मैले देखेको छु ।
अर्कोतर्फ उम्मेदवारले बनाएको पर्चाको रंगको विषयमा कुरा त उठेको छ । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
तपाईंहरू गुटवन्दी मौलाउन दिँदैनौं भन्नुहुन्छ, गुटबन्दी र राजनीतिको आवरणमा नदेखिएका उम्मेदवारहरूले त आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नै लिए नी हैन?
हुन सक्छ । एनअनरएनमा केही यस्ता मानिसहरू पनि छन्, उहाँहरू कुनै पदमा नरहेर पनि जिम्मेवार भूमिका खेलिरहनु भएको छ । केही मानिसहरू सुरू देखि नै एनआरएनमा लागेर प्रभावकारी काम गर्दै आउनु भएको छ । तथापी हामीहरूले उहाँहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । त्यो ठूलो दुर्भाग्य हो । दुई वर्ष अघि नेपाल फेस्टिवलमा चुनाव जितेकाहरूको भन्दा नेतृत्वबाट बाहिरिएकाहरूले नै उल्लेख्य काम गर्नुभयो । निर्वाचनमा त्यति धेरै मानिसहरू बिजयी भएता पनि कार्यक्रममा मात्र होइन उहाँहरू मिटिङमा समेत उपस्थित नभएको हामीले देखेका छौँ । हिजो निर्वाचनमा पराजित मानिसहरूलाई आजपनि एनआरएनमा स्थापित गर्ने अवस्था नबन्न सक्छ । यसमा म आफैँ फेलिएर भएको महसुस गरेको छु । त्यस्तो व्यक्तिमा समिम अनवार को नाम लिन चाहन्छु ,उहाँ स्वतन्त्र भएका कारण नेतृत्वमा आउन सक्नु भएको छैन ।डिला खरेल को अवस्था पनि त्यही हो । पछिल्लो समय युवा पंक्ति एनआरएनमा प्रवेश त भएको छ । तर एनआरएनको संस्थागत विकासको लागि त्यो पर्याप्त भने छैन । अर्को, संकृर्ण राजनीति एनआरएनमा फस्टाउनु दुःखद् कुरा हो ।
हिजो ३०/३५ जनाबाट सुरू भएको एनआरएनमा मानिसहरूको सहभागिता बढेका छ । आज ६ हजारको हाराहारीमा सदस्य संख्या पुगेको छ । ६०/७० हजार नेपाली समूदायको बीचमा ६ हजार सदस्य हुनु राम्रो कुरा त होइन तथापी यो उल्लेख्य पनि हो । राजनीति हावी हुन थालेको भन्दै अझै केही मानिसहरू बाहिरै छन् । केही प्रोफेसनलहरू पनि आउन खोजिरहेका छन्, उहाँहरूलाई भित्र्याउन सकिरहेका छैनौँ ।
केही मानिसहरू व्यवसायीक लाभका लागि एनआरएनमा लागे भन्ने गुनासो पनि छ नी?
हामीले आफैँ आफ्नो भावना सुधार्नु पर्दछ । एनआरएनमा लिने केही छैन, दिने मात्रै हो । एनआरएनमा सक्रिया भएप वापत उल्टै विभिन्न शूल्क र सहयोग रकम तिर्नु पर्दछ । एनआरएनमा लाग्नुको उद्देश्य खाली नेपाल र नेपालीको विकास गर्ने नै हो । त्यसकारण मेरो सुझाव छ, तपाईं जे स्वार्थ पुरा गर्न आएपनि रित्तै फर्कने हो ।
तैपनि एनआरएनलाई मोहोरा बनाएर व्यवसाय फस्टाउनेहरू पनि छन् नी हैन?
हुन सक्छ । एनआरएन सञ्जाल भएकाले केहीले त्यो ढंगबाट उपयोग गर्न खोजेका हुन सक्छन् । एनआरएनको ७० भन्दा बढी देशमा सञ्जाल भएकाले उनीहरूले संस्थालाई आफू अनुकुल पार्न खोजेका पनि हुन सक्छन् । संस्थामा सबै व्यक्ति राम्रा नै आउँछन् होइन । तर, हामीमा संस्थागत सोचाईको विकास हुँदैछ । हामीमा परिपक्वता पनि आउँदैछ । त्यसकारण विस्तारै हामीमा संस्थागत भावना जागृत पक्कै हुन्छ । र त्यस्ता मानिसहरू आफैँ पछि हट्छन् ।
निर्वाचन कत्तिको निष्पक्ष होला त?
निर्वाचन एकदमै निष्पक्ष हुनेछ । त्यसका लागि हामीले व्यापक छलफल गरेका छौँ । त्यसका लागि निर्वाचन प्रमुखहरूले अन्तरक्रियाहरू गरिरहनु भएका छ । निर्वाचनमा धाँधली हुँदैन भन्नेमा तपाईंहरू विश्वस्त हुनु भएहुन्छ ।
अवको एनआरएन कस्तो हुनुपर्ला ?
एनआरएनमा समूहगत भावनाको विकास हुनु पर्दछ । एनआरएनमा सवैले सवैको अपनत्व हुने किसिमको काम हुनु पर्दछ । कामको जस र अपजस व्यक्तिले होइन सिंगो टीमले नै लिने काम गर्नु पर्दछ । टीम सबैमा उत्तरदायित्वको भावना हुनुपर्दछ । यहाँ के पनि सुनिएको छ भने मत पाउन कसैले कसैलाई सदस्य बनाइदिएको छ । त्यो गलत कुरा हो । त्यसले संस्था र व्यक्ति दुवैको अहित गर्छ । कसैले सदस्य बनाएर बन्ने होइन आफैँ स्वतःस्फूर्त सदस्य बन्ने हुनुपर्दछ । मतदाता बन्नका लागि मात्रै सदस्य बनियो भने त्यो आफैँलाई प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यसकारण संस्थाको र आफ्नो भूमिकाको बारेमा बुझेर संस्थामा लाग्नु पर्दछ । पछिल्लो समय हामीले त्यो रोक्ने काम गरेका छौँ ।
मतदाताहरूलाई केही सन्देश छ की ?
मतदान गर्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरौँ । को योग्य हो, को अयोग्य हो भन्ने बारे व्यक्तिको कार्यक्षमताको आधारमा मुल्यांकन गरौँ । व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत हितलाई सर्वोपरी राखेर हिँडेको मानिसलाई सहयोग गरौँ । व्यक्ति त आउँछन जान्छन हामीले संस्था बचाउनु पर्दछ । त्यस्तै व्यक्तिगत लाभ हानी भन्दा पनि संस्थाको विकासको बारेमा चिन्तित होऔँ ।
नेपालमा दुई वर्षभित्र खुला विश्वविद्यालय सुरू हुन्छः डा. राजु अधिकारी
गैर आवसिय नेपाली संघ (एनआरएन) ग्लोवल कमिटी, आइ सि सि मेम्बर , चियर पर्सन्, स्किल नलेज एण्ड इनोभेसन डा राजु […]